Ikhaya lelizwe eliphumlayo kunye neGumbi leKumkanikazi elipholileyo
Umtsalane wendlu endala yasefama! Ikhaya lethu eliphangaleleyo likude ngemizuzu ukusuka kwiWhistling Straits, Road America kunye neYunivesithi yaseLakeland, kunye nomgama olinganayo ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iMilwaukee kunye neGreen Bay. Hlala kwigumbi labucala elinebhedi eyi-queen enye kunye negumbi lokuhlambela. Ndwendwela izilwanyana zasefama, phumla ngasechibini okanye wonwabele umlilo opholileyo emva kosuku olude lokuphonononga izinto ezininzi ezenziwa yiSheboygan County. Unokufikelela okwabelwana ngazo kwikhaya elinegumbi lamaxesha ama-3 ngaphezulu kokujonga indawo enkulu engasemva.
Ikhaya lethu elivulekileyo linendawo kwaye liyamema ukuba sijonge ukwamkela iindwendwe zethu. Igumbi lokulala linebhedi eyi-queen eyi-1 enegumbi lokuhlambela eli-3/4. Iitawuli, i-closet, i-dresser, isibuko, i-hangers, i-hairdryer, imithwalo, kunye neengubo ezongezelelweyo zonke zibandakanya ukwenza ukuhlala kwakho kukhululekile kangangoko kunokwenzeka. Igumbi likumgangatho we-2 ngoko kuya kufuneka udlule ekhaya kwaye unyuke izinyuko. Kukho iWiFi efumanekayo kulo lonke ikhaya kwaye inabela kwidesika ngaphandle.
Ikhaya lethu lisemaphandleni kodwa likufutshane kakhulu! I-Elkhart Lake, iNdlela yaseMelika kunye ne-Whistling Straits yi-15 min kuphela kude. I-Kohler, iBlackwolf Run kunye neBull kwiiFama zasePinehurst zikumgama we-20 kuphela. Ke kukho "iNdawo Enkulu kwiChibi eliKhulu" iSheboygan - esi sixeko siqhayisa ngeyona ndlela ibalaseleyo yokusefa kwichibi elikhulu - ngumgama omfutshane we-10 min drive.
Ke nokuba ibetha umdyarho, amakhonkco, ukusefa okanye ukukhwela ibhayisekile iSheboygan County inakho konke kwaye ikhaya lethu likulungele!
Ukuba uqikelelo lungathanda ukuba neemfihlo zabo luya kuvunywa kodwa siya kuba sekhaya okanye sifumaneke xa sifuneka. Mna nomyeni wam sinemisebenzi emihle ebhetyebhetye kwaye sisoloko sifumaneka ngefowuni.